Xildhibaanadii xilka ka qaaday madaxweyne Guuleed oo diiday inay la kulmaan wafdiga wasiir Odowaa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanadii xilka ka qaaday madaxweyne Guuleed oo diiday inay la kulmaan wafdiga wasiir Odowaa
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xildhibaanada dhawaan xilka ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ay si cad u diideen inay la kulmaan wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Odowaa.
Wasiir Odowaa oo maalintii shalay gaaray magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa uljeedka safarkiisa la sheegay inuu yahay sidii uu xal ugu heli lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug.
Illaa 54 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa dhawaan xilka ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed, kadib markii ay ku eedeeyeen howl gudasho la’aan iyo inuu curyaamiyay howlihii ka jiray maamulkaas.
Xildhibaanadaasi ayaa weli ka biyo diiddan inay kulan la yeeshaan wasiir Odowaa oo haatan magaalada Cadaado u jooga xal u helidda xiisada siyaasadeed ee ka dhex aloolsan xildhibaanadaasi iyo madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed.
Dhinaca kale, guddiga doorashada oo ay dhawaan magacaabeen xildhibaanada xilka ka qaaday madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa bilaabay inay qabtaan codsiyadda musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Galmudug.
Illaa iyo haatan ma jirto qof musharax ah oo weli codsi soo gudbistay, waxaana weli kacsan xaalada siyaasadeed ee maamulka Galmudug.
Ugu dambeyntii, wasiir Odowaa ayaa la sheegayaa inuu haatan xarunta madaxtooyada Galmudug kulamo kula yeelanayo xildhibaano iyo waxgarad kasoo jeeda deegaanada maamulkaas, waxaana uljeedka kulankaasi uu yahay sidii xal loogu heli lahaa xiisada siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug.